Dadka Buuhoodle Oo Billaabay Deeq Aruurin Qeyb Ka Ah Samatabixinta & Gargaarka Fatahaaduhu | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dadka Buuhoodle Oo Billaabay Deeq Aruurin Qeyb Ka Ah Samatabixinta & Gargaarka...
Dadka Buuhoodle Oo Billaabay Deeq Aruurin Qeyb Ka Ah Samatabixinta & Gargaarka Fatahaaduhu
Dadka deegaanka ee magaalada Buuhoodle ayaa billaabay olole deeq aruurin ah taas oo loogu talo dadka Soomaaliyeed oo ay Waxyeelo ka soo gaareen fatahaadaha labada webiyo ee Shabeele iyo Jubba iyo roobabka xilligan oo isbiirsaday.
Ururka Talo-doon oo ka dhisan Magalada Buuhoodle ayaa ku dhaqaaqay ololahan oo qeyb ka ah in dadka deegaankaasi ku dhaqan ay gacan ka geystaan kaalmada deeqaha loo aruurinayo dad ay saameeyeen fatahaadaha gaar ahaan webiga Shabelle ee magalada Beledweyne.
Dhanllinyaro badan oo si iskood ah isku soo abuulay ayaa lagu arkayaa bartamaha magaalada Buuhoodle ee gobolka Sanaag.
Howshan oo sida lagu soo waramayo ka billaabatay goobaha ganacsiga, xarumaha waa weyn ee shirkaha iyo Guryaha qoysasku ay daganyihiin halkaasoo kooxo dhalinyaro ahi la sheegay in ay ka bilaabeen aruurinta deeq ay ugu talo galeen in ay kaga qeyb qaataan si ay gacan uga geystaan samatabixinta qoysaska ay barakiciyeen fatahaadaha ka dhashay webiga Shabeele uu ku sameeyeeyay dhowaan gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Next articleWeerar Dad Ku Dhinteen oo Ka Dhacay Thailand